Budata Driving Academy Simulator 3D APK maka Android
Budata Driving Academy Simulator 3D
Budata Driving Academy Simulator 3D,
Driving Academy Simulator 3D bụ egwuregwu dị mkpa maka ndị chọrọ ịmụta ịnya ụgbọ ala. Ekele dịrị Simulator 3D Driving Academy, nke ị nwere ike ibudata nefu na nyiwe gam akporo, ị nwere ike mụta ka esi anya ụgbọ ala nobodo na nnukwu okporo ụzọ.
Onye ọ bụla chọrọ ịnya ụgbọ ala, mana ịnya ụgbọ ala anaghị adị mfe. Ewezuga ihe ọmụma nka gị, ọ dịkwa mkpa ịdị jụụ mgbe ị na -anya ụgbọala. Nihi na ụjọ jidere gị noge ọ bụla, ị nwere ike ime nnukwu mmejọ nihi mkpali gị. Iji zere ọnọdụ a, zuru ike wee jiri nwayọ malite igwu Driver Academy Simulator 3D.
Site nụgbọ ala ya dị iche iche na eserese dị ịtụnanya, Driving Academy Simulator 3D na -akụziri gị otu esi anya ụgbọ ala nụzọ dị mfe. Nịkọwa ụmụ akwụkwọ ya iwu niile otu, Driving Academy Simulator 3D na -amalite ịnwale ule mgbe ha mechara iwu. Nime ule ule, a na -atụ ya ma ị na -agbaso iwu ma ọ bụ na ị naghị eme ya. Yabụ ị ga -eme ma were iwu niile.
Na Simulator 3D Driving Academy, ị na -ejikwa ụgbọ ahụ na enyo. Gas na breeki dị nakụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, steering ahụ dịkwa naka ekpe. Site na njikwa ndị a, ị nwere ike ijikwa ụgbọ ala ahụ nụzọ dị mfe ọbụlagodi nokporo ụzọ siri ike. Site na ọrụ ndị siri ike yana akụkụ igwefoto dị iche iche, Driving Academy Simulator 3D na -abịa napụta ndị chọrọ igwu egwuregwu ụgbọ ala. Budata Simulator 3D Driving Academy ugbu a wee bụrụ ọkwọ ụgbọ ala zụrụ azụ.
Driving Academy Simulator 3D Ụdịdị
Driving Academy Simulator 3D bụ egwuregwu dị mkpa maka ndị chọrọ ịmụta ịnya ụgbọ ala. Ekele dịrị...
Ezigbo ụwa na -echere anyị na Super High School Bus Driving Simulator 3D, nke Games2win mepụtara. ...
CSR Racing 2 bụ nke kacha mma egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu na ikpo okwu gam akporo, ma nke anya ma...
CarX Drift Racing 2 bụ ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na usoro CarX, nke kachasị ebudatara ma kpọọ...
Takedown Fast & Furious bụ otu nime egwuregwu mkpanaka maka ndị na-egwu ihe nkiri ngwa ngwa...
Dirt Trackin 2 bụ egwuregwu ịgba ọsọ ị nwere ike igwu na ngwaọrụ mkpanaka gị na sistemụ arụmọrụ gam...
Enwere ike ịkọwa ọsọ maka ịgba ọsọ ọ bụla dị ka egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala nke na-achịkọta atụmatụ...